Sales Driver (Hlaing Thar Yar Office) for Tin Ye Win Distribution Company Limited | Job in Myanmar
Jobs in Myanmar, jobs in Yangon - Sales & Marketing Jobs - Sales Driver (Hlaing Thar Yar Office)
Sales Driver (For Hlaing Thar Yar)
•	To find new customer by weekly/monthly
•	Work asateam in both sales and marketing and cross functional
•	Maintain good relationship with customer.
•	To collect the market survey and market saturation data.
•	Filling up the data & report the competitor price and news actions, customer's consumption, current using product and their requirement in customer's profile.
•	Daily check (Fuel, Water, Air, Oil)
•	Can go trip
•	တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်ရမည်။(သို့) အတန်းပညာ 10 အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် (ခ) (သို့) (ဃ) လိုင်စင် ကိုင်ဆောင်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	အသက် (၂၀) မှ (၄၀) အတွင်း ဖြစ်ရမည်။
•	ယာဉ်မောင်းသက် အနည်းဆုံး (၃) နှစ်ရှိရမည်။
•	ရောင်းမာင်းလုပ်သက် အနည်းဆုံး (၂) နှစ်ရှိရမည်။
•	အလုပ်ချိန်အတွင်း၊ ဆေးလိပ်၊ ကွမ်း၊ အရက် ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။
•	FMCGနှင့် စာရေးကရိယာများ အရောင်းအတွေ့ကြုံရှိလျှင်ဦးစားပေးမည် သွက်လက်၍ အလုပ်ကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နိုင်သူ လုပ်ငန်းတွင်စိတ်ပါဝင်စား၍ ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
•	Auto နှင့် Manual နှစ်မျိုးလုံးမောင်းနှင်နိုင်ရမည်။
•	Salary 250,000We might provide you with uniform
No.69/70Pyin Si Minn Thar Gyi St, Zone (4), Hlaing Thar Yar Industrial City, Yangon,Myanmar.
DORUE ဆိုင်းဘုတ်ရှိပါသည်၊ လမ်းထဲသို့ ဝင်ရန် နှင့် လမ်းထ
Company Industry: Sales Driver (Hlaing Thar Yar Office)